Uyitshaja njani ifowuni yakho ngokwenkampani yakho
Siphila kwihlabathi apho unxibelelwano luye lwaba luyimfuneko, yiyo loo nto sihlala sinxibelelana ngeekhompyuter, iitafile kwaye ngakumbi iiselfowuni.
Abantu abaninzi bakhetha ukuqesha ireyithi ye-intanethi ehlawulelwayo, abanye balawula ibhalansi yabo ngezavenge ezincinci kumaxesha ngamaxesha, kuyo nayiphi na imeko, ukutshaja kuseyinkqubo eyimfuneko kuye wonke umntu.
Iinkampani zonxibelelwano zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokutshaja iselfowuni, ungayitshaja kwakhona ibhalansi yakho yeselula kwi-intanethi, ngomnxeba okanye ngokobuqu ngokuya kwiiarhente ezigunyazisiweyo.
Sikuxelela konke malunga nokutshajwa kweefowuni kwiinkampani eziphambili ngaphakathi nangaphandle kweSpain.
Phezulu kwiselula kwi-intanethi
Okwangoku, kunokwenzeka ukuba uphinde utshaje ibhalansi yakho yeselula ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho okanye usebenze ngoncedo lwekhompyuter enofikelelo lwe-intanethi.
Uninzi lweenkampani zonxibelelwano zikuvumela ukuba ulawule ukutshaja kweselfowuni yakho ngale ndlela, hayi eSpain kuphela, kodwa naphi na emhlabeni ngemizuzwana nje.
Imisebenzi yokutshaja kwakhona iselfowuni kwi-intanethi ilula kakhulu, vele uye kwiwebhusayithi yomqhubi weselula, bhala inombolo yefowuni kunye nebhalansi yokutshaja kwakhona.
Ngale nkqubo, unengenelo yokonga ixesha elininzi onokulichitha kwizinto ezibaluleke ngakumbi.
Unako kwakhona ukongeza ibhalansi yakho kwiselula yakho. Kufuneka ube nekhompyuter enye kuphela enofikelelo lwenethiwekhi. Ngokubanzi, isicelo sisimahla kwaye siyafumaneka kwi-iOS (kwi-App Store) kunye ne-Android (kwi-Google Play), yikhuphele kwaye uyitshaje ifowuni yakho nanini na ufuna.
Fumana ibhalansi yeselula
Nangona eyona ndlela ilula yokongeza ikwi-intanethi, kukho neenkqubo zemveli zokuthenga ngetyala. Inokutshajwa kwakhona ngokuthi:
Iivenkile ezigunyazisiweyo kunye namaziko
Inkonzo yokutshaja kwakhona
Nangona, abanye abasebenzi bohluka kancinci kwinkqubo, bonke bayahlangana kwinjongo yabo: ukutshaja kwakhona ibhalansi.
Okulandelayo, sikushiyela uluhlu ukuze ufunde ngokweenkcukacha inkqubo yokutshaja kwakhona ngefowuni abona baqhubi babalulekileyo beefowuni eSpain:
Layisha kwakhona i-Express TV
Gcwalisa ikhadi le-Postepay ehlawulwa kwangaphambili
Uyifaka njani kwakhona kwi-Iliad
Ukutshaja kwakhona kweTelekom ehlawulwa kwangaphambili
Hlaziya kwakhona i-SFR
Ukutshaja ikhadi lenkcubeko Nuri
Jonga ibhalansi yeselula Sichaza indlela yokwenza inyathelo ngenyathelo!
Hlaziya iClaro yaseArgentina
Gcwalisa iJazzpanda ngefowuni
Hlaziya iDigitel ngeselula
Phezulu kwiselula ngeCubacel
Hlaziya i-Pepephone ephathwayo
Ungatshaja njani kwakhona eRepública Móvil?
Hlaziya ifowuni ephathwayo ehlawulwa ngaphambili eMásMóvil. Amaxabiso
Hlaziya iselfowuni uye e-Ecuador
Gcwalisa ngefowuni kwibhanki yakho
Nangona bambalwa kakhulu abantu abayaziyo, iibhanki zikwabonelela ngenkonzo yokutshaja iibhalansi zeselula ngokukhuselekileyo. Inyaniso yeyokuba, ziya zisanda amaqumrhu ajoyinayo aququzelela le misebenzi yentlawulo kubathengi babo.Le nkonzo inikezelwa kwii-ATM, ii-ofisi zebhanki okanye kwiwebhusayithi yeqonga lebhanki ukuze ungahambi ekhaya.
Iibhanki zesiNtu eSpain bezibonelela ngale nkonzo kangangexesha elithile. Nangona kunjalo, ezinye iibhanki ezincinci azikayifaki le teknoloji kwinkqubo yazo. Makhe sibone ngezantsi ukuba zeziphi iibhanki ezikhuselekileyo zokutshaja kwakhona ibhalansi yakho yeselula.
Uninzi lweebhanki zibonelela ngenkonzo yebhanki ephathwayo. Ngayo, unokuphinda uyitshaje ibhalansi yakho nokuba uphi na, ukusuka kukonwaba kweselfowuni yakho. Ngokubanzi, uluhlu lwabaqhubi beefowuni ezinokutshajwa kwakhona phantsi kolu hlobo lubanzi kakhulu, ukuze kungabikho mntu ushiywe ngaphandle.
Gcwalisa ikhadi le-Hype ehlawulwa kwangaphambili
Phinda uzalise iiPCS
Gcwalisa iAldi Talk
Phezulu kwiselula ngekhadi
Hlaziya i-BBVA yeselula
Hlaziya i-Santander mobile
Gcoba ngefowuni esuka kwi-ING
Hlaziya iLa Caixa ephathwayo
Hlaziya iiselfowuni ngaphandle kweSpain
Ngoku ukutshaja iifowuni eziphathwayo ngaphandle kweSpain kulula kakhulu. Xa uhamba ngaphandle kweSpain ungaqhubeka nokunxibelelana nosapho kunye nabahlobo ngaphandle kwengxaki. Namhlanje, kukho abasebenzi abahlukeneyo beefowuni kwimarike ababonelela ngale nkonzo ngokufanelekileyo.
Kwakhona, ukuba unabahlobo kunye nosapho kwamanye amazwe, unokubathumela ibhalansi ngokuhlawula ngee-euro. Eyona ndlela ilungileyo yokutshaja iselfowuni yakho phesheya kukusebenzisa iwebhu, usebenzisa ikhompyuter yakho okanye ukhuphele usetyenziso kwifowuni yakho eselfowuni.
Kukwakho iindawo zobuso ngobuso ezikuvumela ukuba uhlawule ngetyala kwiiselfowuni kwamanye amazwe. Iindawo okanye amaziko apho le nkonzo ikhoyo zezi: amaziko okufowunela, iikioski, ukuzenzela iinkonzo okanye iivenkile.
Siyazi ukuba ukuba kude nabantu obathandayo kunokuba nzima, kodwa ngenxa yomlingo wonxibelelwano ungaziva usondele kakhulu kubo. Apha sikubonisa iindlela ezininzi onokukhetha kuzo ukuze uhlale unxibelelana nabantu obathandayo.
Hlaziya iselula evela ePeru
Hlaziya iselula evela eChile
Phezulu kwiselula ukuya eMexico
Hlaziya ifowuni yakho eVenezuela
Phezulu iselula evela eBolivia
Phezulu kwiselula ukuya eColombia
Ukutshaja kwakhona kwefowuni yeRebtel ngaphandle kwekhomishini
Hlaziya iTelcel iselula ngokulula nangokukhawuleza
Hlaziya iSuop yeselula ngokulula kwaye ngokukhawuleza
Hlaziya i-Soriana yeselula
Phezulu phezulu kwiMovilnet ehambayo
Phezulu kwiselula evela kwiRiphabhlikhi yaseDominican
Phezulu kwiselula ukuya eCuba
Ezinye iindlela ezahlukeneyo zokutshaja kwakhona iselfowuni
Iinketho zokutshaja kwakhona ibhalansi yefowuni yakho yonke imihla zikhulu. Abasebenzisi befowuni bakunika iindlela ezahlukeneyo zokutshaja ifowuni yakho entsha, xa ungenako ukufikelela kwinethiwekhi. Umzekelo, ii-arhente ezigunyazisiweyo ezinikezela ngenkonzo yokutshaja kwakhona kubasebenzisi befowuni abohlukeneyo okanye iivenkile apho unokuthenga amakhadi e-prepaid.
La makhadi e-prepaid eza nezixa ezahlukeneyo ezikuvumela ukuba ukhethe isixa semali ofuna ukufaka umgca wakho weselula. Ukuzisebenzisa ngokuthe ngqo, jonga nje ikhowudi yokuvula kwaye ugcwalise imiyalelo ngasemva.
Hlaziya ngokutsha okanye uthenge ikhadi elihlawulelwa kwangaphambili: kwii-kiosks, kwiposi okanye kwii-ofisi zorhwebo, kwiivenkile ezikhethekileyo, kwizikhululo zegesi, kwiivenkile ezinkulu, kwiivenkile ezinkulu, kwii-arhente zokuhamba, kumaziko okufowunela, njl.
Kukho iireyithi ezivumela abasebenzisi bazo khangela kwaye ukhuphele unlimited. Kwiimarike kukho abaqhubi abanikezela ngeegigabytes ezingenamkhawulo okanye kunye nomthamo omkhulu wedatha, ukugcina kwiimeko ezininzi isantya esifanayo sokukhangela.
Ngokubanzi, ezi ntlobo zeereyithi zinokungena kwiiphakheji. E-Spain ezinye zeenkampani ezibonelela ngohambo olungenasiphelo okanye olungenamda zezi: IVodafone kunye neYoigo. Eyona nto ilungileyo kukuba unokuzisebenzisa kwamanye amazwe eManyano yaseYurophu.
Kukho nabaqhubi ukuba, nangona iireyithi zabo zingenasiphelo, zinenani elikhulu phantse unlimited gigs ukuhamba ngokuzolileyo inyanga yonke. Phakathi kwezo nkampani kukho: Movistar, Orange, Simyo, Lowi, MásMóvil kunye neRepública Móvil.
Amaxabiso phakathi kwamaxabiso akhoyo aya kwahluka ngokwedatha enikwe yinkampani yefowuni. Ezi zisusela kumda ukuya kukhangelo lwencwadi olungenasiphelo ukuya kuthi ga 50 Gb. Isisombululo kwabo basebenzisi basebenzisa kakhulu i-intanethi.
Ulwazi malunga neicookies
Phezulu phezulu kweMobile Ngo-2022-Uyitshaja njani ifowuni yakho inyathelo ngenyathelo